Ukuphupha Ukuba Ulahlekile | Intsingiselo 100% Ityhilwe!
kuqala » Amaphupha » phupha ulahlekile
phupha ulahlekile usenokuba ufuna ukudlulisela kuwe ukuba kufuneka utshintshe indlela yobomi bakho.
Eli phupha lisenokuba lisakuxelela ukuba wenza into engalunganga okanye kukho into eza kutshintsha ebomini bakho.
Intsingiselo yokwenene yeli phupha iya kuxhomekeka kwinto enye kuphela, ukuba kwenzeka njani iphupha.
Kuya kufuneka wazi ngokuqinisekileyo zonke iinkcukacha zephupha lakho ukuze wazi intsingiselo yalo yokwenyani.
Ngapha koko, awafani onke amaphupha, akunjalo?
Sigqibe kwelokuba sibeke zonke iimeko ezinokwenzeka kweli nqaku.
Qhubeka ufunda ukuze uchaze kube kanye umyalezo eli phupha lifuna ukukugqithisela kuwe.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ulahlekile
Okokuqala kufuneka uhlalutye zonke iinkcukacha zephupha lakho.
Ukuphupha ukuba ulahlekile elwandle kuthetha into eyahlukileyo ngokupheleleyo kunokuphupha ukuba ulahlekile ehlathini okanye kwi-favela, uyazi?
Asikokulahleka nje okubalulekileyo.
Kukwabalulekile ukwazi indawo!
Nokuba yayingaziwa, ingaqhelekanga, imbi okanye intle.
Ngaloo nto engqondweni, sagqiba ekubeni sibeke zonke iintsingiselo zamaphupha kunokwenzeka nangaphantsi.
Ukuphupha ulahlekile kwindawo ongayaziyo
Xa sikwindawo engaziwayo sisodwa itsala uloyiko noloyiko ezintliziyweni zethu.
Olu loyiko kunye nolu loyiko lunxulumene ngokuthe ngqo nentsingiselo eqinileyo yeli phupha elinye.
Ukuphupha ukuba ulahlekile kwindawo engaziwayo kuthetha ukuba uya kuhamba kwinqanaba lobomi bakho apho awuyi kuba nanto kwaye kungabikho mntu ukukunceda.
Esi sigaba siya kuba yinto entsha kuwe, into enzima ukoyisa, kwaye kuya kufuneka usebenzise onke amandla akho ukuze uphumelele kwesi sigaba.
Into engaziwayo ephupheni inxulumene nokungaziwa kwezisombululo kwiingxaki zakho.
Uloyiko onokuthi uzive ephupheni luloyiko oya kuba nalo ngeli xesha.
Nokuba uwedwa uzama ukulwa rhoqo, kusoloko kukho indlela yokuphuma, kungakhathaliseki ukuba yintoni ingxaki ojongene nayo.
Ukuphupha ukuba ulahlekile kwindawo engaqhelekanga kwaye embi
Enye into yindawo engaziwayo kwaye enye into yindawo engaqhelekanga nembi…
Xa sibona into embi kungenxa yokuba asiyithandi, kule meko asiyithandi le ndawo kuba asizange siyibone kwaye ayithandeki kwaphela.
Ukuphupha ukuba ulahlekile kwindawo engaqhelekanga kunye nembi kuthetha ukuba uya kufumana abantu ebomini bakho ongayi kuthanda ukunxulumana nabo.
Ngamanye amaxesha abantu abangonwabanga bavela ebomini bethu, kodwa ngelishwa kusafuneka sijongane nabo yonke imihla.
Asinakungahoyi wonke umntu, umzekelo emsebenzini, kufuneka nje sifunde ukusebenzisana nabo.
Kuya kuba njalo nakuwe, awuzukubathanda kakhulu aba bantu, kodwa kuya kufuneka ufunde ukujongana nabo kuba uzojongana nobuntu babo mihla le.
Eyona nto inqabileyo kwaye imbi kakhulu indawo obukuyo, abantu baya kuba mbi ngakumbi.
Zama ukungoyiki eli phupha, sijongana nabantu abanje mihla le, yeyona nto iqhelekileyo emhlabeni.
Ukuphupha ukuba ulahlekile ukuze ufumane indlela
Sinephupha elahluke kancinci apha, kodwa sinesilumkiso esibaluleke kakhulu kubomi bakho…
Akulunganga kakhulu xa singayifumani indlela…. Ngokuqhelekileyo oku kuhambelana nokudideka kobomi.
Ukuphupha ulahlekile ufumana indlela yakho kuthetha ukuba udinga isikhokelo ebomini bakho.
Esi sikhokelo kuya kufuneka sinikwe ngumntu onamava kunye nangaphezulu.
Ngokuqhelekileyo sinokukhangela kwintsapho yethu ukuze sifumane olu khokelo, ukuba kunokwenzeka luvela kubazali nakoomakhulu notatomkhulu.
Akunakwenzeka ukukuxelela ukuba luhlobo luni lwesikhokelo oludingayo, kodwa ndithembe, uya kuyazi ukuba iya kuba yintoni na xa uzifumene ngelo xesha.
Inokuba sisikhokelo ukwazi indlela yokusombulula uthando, umsebenzi okanye eminye imibuzo elula ebomini.
Into eqinisekileyo kukuba ngaphandle kolu ncedo luxabisekileyo awuyi kuyazi into omawuyenze.
Ukuphupha ukuba ulahlekile kwi-favela
I-favela yindawo eyingozi kakhulu kwaye eBrazil akukho kunqongophala kweefavelas apho unokulahleka khona…
Ukuphupha ukuba ulahlekile kwi-favela liphupha elingaqhelekanga kakhulu, kodwa linentsingiselo eyinyani.
Emva kokuphanda amaphupha athile sikwazile ukufikelela kwisigqibo.
Ukuphupha ukuba ulahlekile kwi-favela kuthetha uloyiko kunye noloyiko malunga nekamva.
Mhlawumbi ikamva lakho alithembisi kakhulu okwangoku kwaye mhlawumbi amathuba obomi awakufiki.
Into eqinisekileyo kukuba uyoyika ukungaphumeleli okanye ukoyika umngeni othile onokuthi uze endleleni yakho.
Kuyinto eqhelekileyo ukuphupha ukuba ulahlekile kwi-favela xa usoyika ukuwela kwintswela-ngqesho, ungafumani nomsebenzi okanye xa usoyika ukungakwazi ukuhlawula amatyala akho.
Nangona iliphupha elinqabileyo, inyaniso kukuba kukho abantu abanalo.
Sathi sakulahleka elwandle, sasingaboni kwanto.
Sibona kuphela amanzi, amanzi kunye namanzi amaninzi.
Sijonga elundini phayaa kwaye sibona umgca owahlula isibhakabhaka elwandle kwaye uphanziswa ngokupheleleyo.
Ukuphupha ukuba ulahlekile elwandle kuthetha ukuba kufuneka ubone ngakumbi ngaphakathi kwakho ukuze ube ngumntu ongcono.
Mhlawumbi ubomi bukwenze wangumntu ongqwabalala, obandayo nongenabulungisa.
Yinto eqhelekileyo ukuba ubomi busitshintshe, imiceli mngeni yabo itshintsha indlela esicinga ngayo, kodwa kukwabalulekile ukuba sizame ukubuyisela ingqondo yethu eqhelekileyo ngamaxesha athile.
Ukuba uziva ngathi awumdleli mntu okanye wenza into engalunganga, zama ukuyitshintsha loo nto.
Ukuphupha ulahlekile elwandle luphawu lokuba kufuneka utshintshe ube ngumntu ongcono.
Zama ukungatshintshi kangako ngobomi, kuyinyani ukuba kunzima kuwe amaxesha ngamaxesha, kodwa ezi ziimvavanyo nje zokuchasa kwethu kunye nobuchule bethu.
Eli sele liphupha eliqhelekileyo ngakumbi!
Kuyinto eqhelekileyo ukubona iindaba zabantu abalahleka kwiintyatyambo kwaye oku kuyinyani...
La maphupha, ngamanye amaxesha ayenzeka ngokwenene, anentsingiselo ehambelana nobuntu bakho.
Kuthetha ukuba unobuntu obunamandla kakhulu kwaye kuthatha okuninzi ukukuthoba.
Ukuphupha malunga nokulahleka, oko kukuthi uphelele ehlathini, kubonisa amandla akho okukhokela kwaye uphile ngaphandle kokuphazamiseka kwabanye abantu.
Yinyani ngenene, uzimele kwaye awudingi ncedo luninzi ukuze ufumane iibherengi zakho ebomini.
Bambalwa abantu abazimeleyo kunye nobuntu obunamandla njengawe, unokonwaba kakhulu ngaloo nto!
Ilahlekile kwisixeko esikhulu
Isixeko esikhulu singcono kakhulu kunehlathi okanye ulwandle, akunjalo?
Okusingqongileyo kwaziwa ngcono kwaye ayisoyikeka nesiqingatha njengezinye iindlela.
Ukuphupha ukuba ulahlekile kwisixeko esikhulu, esigcwele izakhiwo, iimoto kunye nokudideka, kuthetha ukuba ubomi bakho buya kuhamba ngesigaba esinzima.
Le ngxokozelo iya kunxulumana ngokuthe ngqo nokuphithizela okubonayo esixekweni.
Esi sigaba siya kukushiya uxinezelekile kwaye ungazi ukuba wenzeni.
Ilahlekile esitratweni, kungekho bantu kufutshane
Ngaba uphuphe ukuba ulahlekile esitratweni, ukuba awubonanga nto okanye nabani na okufutshane nawe?
Oku kunxulumene nokunqongophala kwenkxaso oya kuba nayo ebomini bakho.
Ngelishwa, ukuphupha ukuba ulahlekile esitratweni kuthetha ukuba uya kungabikho inkxaso ebomini bakho ngamaxesha anzima kakhulu.
Le nkxaso iya kunqongophala kubahlobo bakho, usapho kunye nabantu obaqhelileyo.
Yinto eqhelekileyo ukuba asisoloko sinabantu abasecaleni kwethu ukujongana nayo yonke into kunye nawo wonke umntu.
Kufuneka ufunde ukulwa wedwa kangangoko unako.
Ngaba eli phupha lihlala lilibi?
Ngelishwa eli phupha lihlala lithetha izinto ezimbi ebomini.
Idla ngokunxulunyaniswa nokunqongophala kwenkxaso kunye nobulolo esinokubufumana kwikamva lethu.
Kufuneka ubone ngqo ukuba lalinjani iphupha lakho ukuze ubone intsingiselo yalo yokwenyani.
Qaphela ukuba amanye amaphupha ayahluka kumntu nomntu, njengoko kunjalo nentsingiselo yawo.
Ukuphupha malunga nokulahleka kungenzeka ngamawaka eendlela ezahlukeneyo kwaye asinazo zonke ezikhankanywe kulo lonke eli nqaku.
Ukuba ubunephupha elahlukileyo, ungalibazisi ukushiya i-avios encinci apha ukuze sichaze ngokuthe ngqo ukuba lithetha ukuthini.
Ukuphupha umntu oswelekileyo
phupha malunga nokuya exesheni
Uyazi kuthetha ukuthini ukuphupha ulahlekile elwandle, ehlathini okanye embindini wesixeko kungekho mntu ujikelezileyo?
Njengoko usenokuba sele uqaphele, eli phupha linokuba namawaka eentsingiselo ezahlukeneyo.
Ngoku kukuwe ukuba uhlalutye zonke iinkcukacha zayo ukuze ukwazi ukubona ukuba yintoni umyalezo wokwenene oza kuhanjiswa.
Ungaze ulibale ukuba ukuba unephupha elahlukileyo ungalijonga kwibhlog yethu, sinamanqaku amaninzi aneentsingiselo ezahlukeneyo zokutyhila!
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha ulahlekile
1.1 Ukuphupha ulahlekile kwindawo ongayaziyo
1.2 Ukuphupha ukuba ulahlekile kwindawo engaqhelekanga kwaye embi
1.3 Ukuphupha ukuba ulahlekile ukuze ufumane indlela
1.4 Ukuphupha ukuba ulahlekile kwi-favela
1.5 ilahleke elwandle
1.6 ilahlekile ehlathini
1.7 Ilahlekile kwisixeko esikhulu
1.8 Ilahlekile esitratweni, kungekho bantu kufutshane
2 Ngaba eli phupha lihlala lilibi?
NgoFebruwari 9, 2019, 8: 31 pm
Ndihlala ndiphupha ndilahlekile kwaye andikwazi kufika ekhaya. Kodwa ngokuqhelekileyo emaphupheni ziindawo ephupheni ngokwalo ndiyayazi indlela eya kwindawo endifuna ukuya kuyo, yindlela endiye ndayenza izihlandlo ezininzi, umzekelo, indlela eya ekhaya, kodwa ngenxa yesizathu esithile ndiyayilibala indlela kwaye ndiyayilibala. andinakubuyela umva. Ingaba ithetha ntoni?
NgoFebruwari 22, 2019, 10: 57 am
Ndilithandile eli nqaku, lifana nephupha endiliphuphileyo. Bendisedolophini nomntu endingamaziyo sikhangela indlela yokuya kwindawo ebesele siyazi kodwa asizange sifike apho kwabe kungxola iimoto nokuphithizela kwandenza ndoyika. Kwaye ngequbuliso saphela kwisitrato esasiyindawo yokuthengisa ngomzimba kunye namantombazana amaninzi kunye namakhwenkwe angaziwayo. Kwakungekho ndawo i-ex boyfriend yam yayidlula kwalapha estratweni ndandinentloni xa indibona. Kuvele kwathi gqi igeza laqalisa ukubaleka emva kwethu lomntu bendihamba naye wahamba indlela enye nam ndaya kwenye bendisoyika ndabhabha ndizama ukukhangela omnye ndavuka ephupheni. Ndincede ndiliqonde eli phupha ndicela.
Ngomhla wama-27 kuMatshi 2019, 12: 40 pm
Ndiphuphe ndifika endlini ndinenja kamama ngaphakathi kulandlu kukho indawo emnyama kugcwele amacango ngandlela thile ndaqala ndawavula ngathi ndibaleka into endingayifumaniyo yilonto. indenze ndaziva ndinxunguphele ekugqibeleni ndikwazile ukufumana indlela yokuphuma kwaye yonke indawo ibicacisa bekungasekho mnyama. Kunokuthetha ntoni oku?